Ukukhethwa kwezixhumi zokubopha izintambo zezimoto
Ukukhethwa kwezixhumi zokubopha izintambo zezimoto Isixhumi siyingxenye ebalulekile yehhanisi lezintambo, elisetshenziselwa ukuxhuma nokuvikela ihhanisi lezintambo. Ukuqinisekisa ukudluliswa okujwayelekile kwamandla nezimpawu, ukukhethwa kwezixhumi kubaluleke kakhulu. Lo mbhalo wethula ukuqaphela ...
Isingeniso solwazi lwesixhumi nomlando waso wokuthuthuka
Izixhumi ezahlukahlukene zikagesi ziyizinto ezisemqoka kumadivayisi amaningi kagesi ngoba angabona futhi avikele ukudluliswa kwezimpawu zikagesi. Ukusuka ekuxhumeni izingxenye eziyinhloko zamakhompiyutha kuya ezintanjeni zokuxhuma ezimotweni esizishayelayo, badlala izindima ezahlukahlukene, nezinhlelo zokusebenza ...
Ulwazi oluyisisekelo lokuklanywa kwe-wiring harness design 20200914
Ulwazi oluyisisekelo lokuklama izintambo zezintambo zezimoto Ihhanisi lezintambo zezimoto lingumzimba oyinhloko wesekethe lezimoto, futhi asikho isifunda semoto ngaphandle kwehhanisi lezintambo. Okwamanje, noma ngabe kuyimoto kanokusho esezingeni eliphezulu noma iyimoto ejwayelekile eyonga imali, uhlobo lwamaharnela entambo ...
ikhebula inhlangano VS wire amahanisi
Ikhebula Assembly. I-Wire Harness Amagama athi “ikhebula lenhlangano” kanye “nentambo yokubopha izintambo” avame ukusetshenziswa ngokungafani. Eqinisweni, amagama athi "ikhebula" nelithi "ucingo" nawo asetshenziswa ngokungafani. Kepha, lokhu kwenzelwa umuntu ojwayelekile. Okobuchwepheshe nalabo abaziyo ngobuchwepheshe balezi zinto, wonke ama-thes ...
Izintambo Zokubopha Izintambo Nezikhumulo - Ukwenza I
Izixhumi ze-rness Nezindawo Zokugcina - Ukwenza Ukukhetha Okufanele Ihhanisi lezintambo liyisakhi esinezintambo eziningi ezifanayo zikagesi ezihambisa amasiginali noma amandla; izintambo zihlanganiswa ndawonye ngamateyipu kagesi, imijelo, intambo, noma okunye okunjalo. Kepha, la mahhanisi ezintambo awasizi ngalutho uma ...
KUNGANI UKUQINISEKISWA KWEZINCWADI EZINKIMBILE KUNGEKHO UKUSETSHENZISWA NGOKUGCWELE
Lapho sicabanga ngokukhiqiza ngekhulu lama-21, sibheka imishini ezenzakalelayo ikhipha ngokushesha imikhiqizo emisha kalula. Ngakho-ke kungani inqubo yokukhiqiza izintambo eziyinkimbinkimbi yezintambo ingakwazi ukuzenzakalela nayo ngokuphelele? Ukuphendula lo mbuzo, sidinga ngaphansi okungaphansi ...
Ihhanisi elenziwa ngocingo lenzelwe ukwenza lula ukwenziwa kwengxenye enkulu, futhi lenzelwe ngokuya ngezidingo zejometri kanye nezikagesi zomshini okufanele ufakwe kuwo. Amahhanisi ezintambo asetshenziswa kakhulu embonini ye-elekthronikhi, i-automot ...
Ngonyaka Owodwa, Izigidi Zezimoto Zenziwa Emhlabeni Wonke.
Ngonyaka owodwa, izigidi zezimoto zenziwa emhlabeni wonke. Ngenkathi izitayela, izingxenye nezici kungahluka, yonke imoto idinga ukuboshwa ngocingo. Ihhanisi lixhuma izintambo kuyo yonke imoto, ifaka yonke into amandla kusuka esiteringini samandla namalambu angaphambili ukuya kudeshi ...
I-OLINK TECHNOLOGY IZINDABA ---- YINI UKUQHAWULA NGOKWENCWA? Izintambo zokubopha izintambo ziyimihlangano enezintambo eziningi ezilengisiwe ezisikiwe noma eziboshwe ndawonye. Le mihlangano yenza lula ukufakwa ngesikhathi sokukhiqizwa kwemoto. Ba ...
Ukuqeqeshwa Kwentambo Yezintambo Nezintambo
Lesi isingeniso sekhebula KAKHULU nezintambo zokubopha izintambo ekilasini lomhlangano. Lokhu kuyizandla ekilasini abakhi bezintambo abangazengeza kulwazi lwabo lwenqubo yokuhlola engu-620 noma bakwazi ukuqeqesha abasebenzi abasha ngamasu afanele okusika, ukukhumula, ukukhumula nokuhlanganisa ...